Farmaajo: Haddii aydan waxba ka qaban karin amniga fadlan ka hor wareega shacabka… – Hagaag.com
Farmaajo: Haddii aydan waxba ka qaban karin amniga fadlan ka hor wareega shacabka…
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ku canaantay amni darida Guddoomiyaasha degmooyinka, taliyaasha saldhigyada gobolka Banaadir, taliyaha qaybta G/Banaadir, Guddoomiyaha gobalka Banaadir iyo afarta taliye ciidan ee Soomaaliya kadib kulan ka dhacay xalay madaxtooyada Soomaaliya.
Kulankan oo qaatay muddo saacado ah ayaa loogaga hadlay ammaanka magaalada Muqdisho iyo sababaha keena in ciidamada ammaanka ay ka hortagi waayaan qaraxyada iyo dilalka ka dhaca caasimada dalka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay in kulankan uu canaan xoog leh u soo jeediyay taliyaasha degmooyinka, Guddoomiyaasha, iyo mas’uuliyiinta kale ee amniga waxana uu ugu baaqay inay is casilaan haddii aysan ammaanka waxba ka qaban karin.
“Fadlan dadkii iyo hantidooda waa isku dhamaadeen, maxaa idinka qaldan, Haddii aydan waxba ka qaban karin amniga fadlan ka hor wareega shacabka”, ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo oo wajigiisa ay ka muuqatay carro xoog leh.
“Uma dulqaadan karo waxa socda, macquul maahan, hadii ay caqabad jirto maxaa idinka hortaagan inaa soo gudbisaan”, ayuu sii raaciyay Madaxweyne Farmaajo.
Kulankan uu la qaatay Madaxweynaha taliyaasha ciidamada ayaa ahaa mid ka duwan kulamadii hore waxaana kulanka laga dareemayay in Madaxweynaha uu aad uga xun yahay hab dhaqanka ciidamada oo sugi la’ amaanka caasimada dalka.